बागलुङ नगरपालिकामा मेयरमा एमाले, उपमेयरमा राप्रपाको विजय निश्चित ! – ebaglung.com
बागलुङ नगरपालिकामा मेयरमा एमाले, उपमेयरमा राप्रपाको विजय निश्चित !
२०७४ जेष्ठ ४, बिहीबार १०:०४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७४ जेठ ४ । बागलुङ जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउपालिकाहरुको निर्वाचन परिणाम आउने क्रम जारी छ । अहिले सम्म घोषित नतिजा अनुसार गल्कोट नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस र ढोरपाटन नगरपालिकामा एमालेको विजय भएको छ । बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाको मतगणना जारी छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका १ देखी १२ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । अहिले सम्म एमाले प्यानलले ११ वटा वडाहरुमा अध्यक्ष सहित करीबकरीब प्यानलै जितेको छ भने ११ नं वडामा प्यानलै सहित नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । अब मतगणनाको परिणाम आउन १३ र १४ नं वडा बाँकी रहेको छ ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार मेयरमा एमालेका जनक पौडेलले १०२२१ र उपमेयरमा राप्रपाका सुरेन्द्र खडकाले ९३८७ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली काँग्रेसका मेयरका उमेदवार बसन्तकुमार श्रेष्ठले ७८१३ र उपमेयरकी उमेदवार सकुन्तला शर्माले ७१९३ मत प्राप्त गरेका छन् । अहिले सम्मको मतपरिणाले नेपाली काँग्रेस २४ सय मतले पछाडी रहेको छ । १२ वडाहरुको मतगणनाको ट्रेण्ड हेर्दा बागलुङ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर एमाले र राप्रपाको पोल्टामा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
उता जैमिनी नगरपालिकाका वडा नं ५, ६, ७, ८, ९ र १० को मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । अहिले वडानं ३ र ४ को मतगणना जारी छ भने यसपछी वडा नं १ र २ को मतगणना गरिने कार्यक्रम रहेको श्रोतले भन्यो । यहाँ जनमोर्चा र एमाले तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार जनमोर्चा र एमालेको प्यानल थोरै मतले अगाडी रहेको छ । यहाँ नेपाली काँग्रेस वा राजमो एमाले गठवन्धन कसले विजय पाउछ भन्न सकिने स्थिति छैन ।
गाउँपालिकाहरुमा तामानखोला र निसीखोला नेपाली काँग्रेस, बडीगाड र काठेखोलामा एमाले संयुक्त प्यानल, ताराखोला माओवादी केन्द्र, बरेङमा राष्ट्रिय जनमोर्चा विजय भएको छ ।
बानपा ११ मा काँग्रेसका ज्ञानेन्द्र गौतम प्यानल सहित वडाध्यक्षमा विजयी
रंगकर्मी बिक्रम परियाका हत्यारालाई कार्बाहीको माग !